Orinasa mpamokatra Patchered China patch | SJJ
Ny paty vita amboradara, marika na soratra vita amin'ny peta-kofehy dia tonga lafatra ho an'ny miaramila, skotisma zazalahy, satroka, fehiloha ary fanamiana rehetra. Azontsika atao ihany koa ny manao patch 3D embroidery & chenille patch.
Ny peta-kofehy dia zavakanto tantara lava, nisy ny evolisiona telo arivo taona mandraka ankehitriny, nanomboka ny amboradara vita am-piasana mora foana ka hatramin'izao ilay peta-kofehy vita amin'ny milina mandeha ho azy. Ny fangatahana peta-kofehy dia mitombo isan'andro ihany koa, indrindra fa ny patch amin'ny amboradara dia be mpampiasa amin'ny miaramila, sampan-draharahan'ny polisy, serivisy fiarovana, departemantam-panjakana, klioban'ny fanatanjahantena & ekipa, fanamiana ofisialy ofisialy, mosara scout, ary azo apetraka amin'ny satroka sy kitapo.
Ny teknikan'ny peta-kofehy dia nipoitra avy tany Taiwan nanomboka tamin'ny 1984, henjana be ny zaitra, ary ny kofehy faran'ny sisin-tany dia miraikitra amin'ny vodin-damosina. Manana mpanakanto sy teknisianina manana traikefa feno izahay, afaka manamboatra zavakanto famokarana mifanaraka amin'ny volavolanao. Tadiavo ny vahaolana tsara indrindra hahatratrarana ny volavolanao ao anatin'ny 24 ora. Misafidiana anay, mora sy haingana ny maka ny volanao. Ary ny orinasan'i Dongguan anay dia misy milina mandroso 58 eo ho eo, ny milina iray dia afaka mahazo 20-30 pcs mitovy marika vita amin'ny peta-kofehy amin'ny fotoana iray ihany. Ity fahombiazana avo lenta ity dia afaka manampy antsika hanome tolotra amboradara mora vidy ho an'ny mpanjifantsika. Hatramin'ny 12 ny loko ao anaty patch iray, loko isan-karazany mba hampiharihary ny volavolanao.
Izahay dia orinasa nankatoavin'i Disney, orinasa eken'ny skoto amerikana, tafika japoney, orinasa eken'ny hery fiarovan-tena, ary niara-niasa tamin'ny orinasa mpanamboatra marika malaza maro. Azo antoka fa ho afa-po amin'ny kalitaonay ianao. Aza misalasala mifandray aminay ary manaova ny patch misy peta-kofehy.
** Kofehy: kofehy miloko stock 252 / kofehy metaly volamena manokana & volafotsy metaly / fanovana loko misy kofehy marevaka UV / mamirapiratra amin'ny kofehy mainty
** Background: twill / velvet / nahatsapa / landy na lamba manokana
** Fanohanana: Vy amin'ny, taratasy, plastika, Velcro, dity
** Volavola: endrika sy endriny namboarina
** sisintany: fetra merrow / fetra tapaka laser / fetra tapaka hafanana / fetra tapaka tanana
** Size: namboarina
** Fanaterana: 3-4 andro hanaovana santionany, 10 andro ho an'ny famokarana betsaka
Teo aloha: Vola-miaramila
Manaraka: Lanyards lafo vidy - miaraka amina tarehimarika mirongatra na lava
China Badge Patch sy ny peta-kofehy Badge
Patch Scout zazalahy tsara indrindra any Sina
Tapakila scout zazalahy tsara indrindra any Sina
Mpamatsy patch scout zazalahy tsara indrindra any Sina
Patch vita amin'ny peta-kofehy manokana
Patsa misy peta-kofehy tsy misy faran'izay kely indrindra
Patch ny peta-kofehy manokana
Famolavolana kofehy vita amboradara
Patch patch Logo
Fametahana anarana vita peta-kofehy
Kitapo misy peta-kofehy amidy